Soo dejisan eScan Removal Tool 1.0.0.70 – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaeScan Removal Tool
Bogga rasmiga ah: eScan Removal Tool
Isticmaalka EScan – waa adeeg fudud oo si sahlan loo isticmaalo si gebi ahaan loo tirtiro badeecooyinka antivirus eScan. Barnaamijka waxaa loogu talagalay kiisaska ku-guuldareysiga ah ee unugyada badbaadada eScan ee qalabyada Windows. Ka dib markii la furo qalabka eScan, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad xaqiijiso ficilka lagaa saarayo in laga saaro barnaamijyada antivirus, iyo biilka ayaa is-baddali doona nidaamka iyo fulinta saarista. Software wuxuu raadiyaa dhammaan raadadka antiviruses, sida faylalka haraaga ah ama gelitaanka diiwaanka, oo gabi ahaanba ka saaraya nidaamka. Nidaamka ka-saarista antivirus waxaa lagu sameeyaa waqti aan lahayn, ka dib qalabkii EScan Removal Tool ay bixiyaan si ay u dhameystiraan kombiyuutarka si ay u dhamaystiraan ka saarista.
Kama saarin antiviruses eScan
Ka saarida faylasha haraaga ah iyo gelitaanka diiwaanka
Soo dejisan eScan Removal Tool
Faallo ku saabsan eScan Removal Tool
eScan Removal Tool Xirfadaha la xiriira